Waxaa la aasaasay 1988, inta lagu gudajiray duhurkii sare ee da'da da 'da' rap: Popular Jewelry wuxuu ku bilaabmay sidii waab yar oo dahabka laga sameeyo, oo lagu dhejiyay gudaha isweydaarsi xadka u ah Soho, Tribeca, iyo Chinatown. Tan iyo markaas waxay uqaan-gaartey ganacsi is-kaashanaya oo xoog leh - oo dhan iyada oo la ilaalinayo jawiga qoyska ee sokeeya ee lagu qeexay sanadihii hore. Dukaamo badan oo dahabka ah oo ku teedsan marinka Kanaalka Street ayaa loo xidhay si fiican, laakiin Popular Jewelry wuxuu si adkeysi leh ugu adkeystay 30-kii sano ee lasoo dhaafay, isagoo u adkaystay musiibooyinkii ugu adkaa ee dhaqaale iyo kuwa dabiiciga ah. Milkiilaha meheradda, Chiok Va Sam, (aka Eva) ayaa caan ku ah anshaxdeeda shaqo ee aan kala joogsiga lahayn (Caan ka ah waxa loo xidhay meheradda lix maalmood oo keliya tan iyo markii ugu horraysay ee la furay) oo ay weheliso dadaalka iyo xiisaha ay u hayso macaamiisheeda aasaaska maalin kasta.
Popular Jewelry wuxuu ku dadaalay inuu soo saaro dahabka ugu tayada sareeya; si loo bixiyo adeegga ugu fiican iyo khibrada macaamiisha. Waxaan jeclaan lahayn inaan dhaafno rajada macaamiisheena waqti kasta iyo markasta oo aan u adeegno. Tirada dadka ee macaamiisheenna caanka ah waxay u dhexeeyaan farshaxan-yahannada muusikada illaa jilayaasha (labada xiddigood ee soo koraya iyo hoolka / socodka dadka caanka ah); liiskan qadarinta mudan waxaa kujira dadka deegaanka sida xubnaha A $ AP Mob, Amber valletta, Ayo & Teo, CeeLo Cagaaran, Chris Moore, Diggy Simmons, maroodiga Man, ka Xumulaha xajmiga, GoldLink, Jaden Smith, Jake Gyllenhaal, Joey Bada $$, Joji, Kaley Cuoco, Ken fallaago, Kirk Knight, Codie Shane, Macklemore, Playboi Carti, Bangiyada Remy, RiceGum, Ro James, $ ki Masaajuuji Slump God, Smokepurpp, Spencer Pratt, Stefan Charles, Timothy DeLaGhetto, Tracy Morgan, Travis Scott, Uma Thurman iyo Wu-Tang Clan's Cappadonna. Sidoo kale waxaa na barakeeyay macaamiisha caalamiga ah sida kuwa Britain Dev Hynes, Jorja Smith, Yuudas Law, Agaasimaha Farshaxanka Dior Ragga Kim Jones, iyo Lily Allen, Kanada Jazz carte, Jabaan Jiilka Qaxa, Shiinaha Walaalaha sare, xubin hore ee EXO Kris Wu, Vaness Wu, Isbaanishka C. Tangana, Rosalia, Faransiiska Ibeyi, Mexico Paulina Rubio, Kuuriya Beddelaha, iyo Australia Nick Murphy- liiska ayaa sii socda. Waa layaabna ma leh Popular Jewelry Waxay u ahayd baraf dahabka ah oo qurux badan dadka caanka ah iyo dadka maxalliga ahba.
Kala duwanaanshaha - Maxay tahay sababta kaliya ee aan u wadanayno qurxinta quruxda badan
Haddii gabal lagu sumadeeyo inuu yahay ganaax ama dahab qaali ah oo ugu dambeyntii waxay kuxirantahay sheyga laga sameeyay. Dahabka qurxan wuxuu ka kooban yahay biraha qaaliga ah sida dahabka (dahabka qurxan waxaa lagu qeexaa dahab dahab ah oo leh 10K ama ka weyn), qalin qurxin ah, iyo platinum. Sababtoo ah dahabka qurxan wuxuu ka kooban yahay waara, qalab tayo sare leh; daryeel taxaddar leh, waxay si ka fiican uga hor tagi kartaa waqtiga (badanaa badanaa jiilal badan) marka loo eego dhiggooda dharka. Sababahaa dartood awgeed, dahab. Qalin, iyo platinum-kooda waxaay ilaashadaan qiimahooda si aad u wanaagsan - dahabka qaaliga ahi waa maal gashi mudan.